२०७७ जेठ, २३
गतवर्षको चैत २८ र २९ गतेका लागि तय गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा कोरोना भाइरसले उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण स्थगित भयो र जेठ ७ र ८ गतेको नयाँ मिति तय गरियो । परिस्थिति सामान्य नभएकाले दोस्रो पटकमा पनि साधारणसभा हुन नसक्ने भएपछि अनिश्चित समयका लागि साधारणसभा स्थगित गरिएको छ । तर, अहिले महासंघ नेतृत्वलाई असारभित्रै साधारणसभा गर्न दाबब शुरू भएको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको अंश :
कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीका कारण राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कार्यक्रम स्थगित भए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा पनि बन्दाबन्दी खुलेको १ महीनाभित्र गर्ने भनी स्थगित गरिएको थियो । अहिले तपाईंहरूले तत्कालै साधारणसभाको मिति तत्काल तोक्नुपर्छ माग गर्नुभएको छ । महामारीको यस्तो अवस्थामा साधारणसभा गर्नु उचित हुन्छ र ?
हामीले अहिलेको परिस्थितिलाई नबुझेको होइन । तर, महासंघको विधानमा भएको प्रावधानले गर्दा असारपछि वैधानिक संकट आउने देखियो । त्यसैले अहिले साधारणसभाको मिति तोकेर जाऊँ भनेका हौं । विधानअनुसार हामीले गत चैतभित्र नै साधारणसभा सक्नुपर्ने थियो । विशेष परिस्थिति आएमा कार्यसमितिले ३ महीनासम्म साधारणसभाको मिति सार्न सक्छ । ३ महीनाको यो अवधि असार मसान्तमा सकिन्छ । तसर्थ, असारभित्र नै चुनाव गर्नुपर्छ भनेका हौं । तर, यसलाई केही साथीहरूले गलत रूपमा प्रचार गरे ।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि आफ्नो वास्तविकता बिर्सनु भएजस्तो छ । उहाँले महासंघको नेतृत्वमा कसरी आएँ र यसमा कसको भूमिका थियो भनेर विचार गर्नुपर्ने हो । तर, गर्नु भएन । उहाँले यो बुझ्ने प्रयास नगर्दा नै अहिले महासंघभित्र विवादको परिस्थिति आएको हो । वैधानिक रूपमै संकट आउने भएपछि हाललाई असार २५ गतेलाई साधारणसभाको मिति तोकेर जाऊँ भनेको हो । आगामी दिनमा यसरी नै बन्दाबन्दी थपियो भने असारको दोस्रो हप्तामा उपयुक्त निर्णय गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि त हामीले दुईपटक साधारणसभाको मिति सारेका नै हौं । आगामी दिनमा पनि आवश्यक भए साधारणसभाको मिति पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ ।
यसअघि कार्यसमितिले निर्वाचनको मिति नै तोकेर जाने निर्णय गरेको हो । तर, पछि अध्यक्षले बाधाअड्काउको प्रस्ताव लिएर हाललाई चुनाव नगर्ने बताउनुभयो । जहाँसम्म लाग्छ, यसमा उहाँलाई कतैबाट दबाब आएको हुन सक्छ ।
महासंघको अहिलेको नेतृत्वलाई तपाईंले नै चलाएको भनिन्छ नि । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको कार्यसमिति वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले स्थापित समिति हो । अध्यक्ष राणा त्यो स्थानमा कसरी पुग्नुभयो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर, उहाँले यस अवस्थामा पनि बाधा अड्काउको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, जुन अहिलेको लागि आवश्यक होइन । यसका लागि विधानमा छुट्टै प्रक्रिया छ । यस्तो प्रस्ताव कार्यसमितिको दुई तिहाइ सदस्यले पारित गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । विधानमा नै चैत २९ गते भित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा थप ३ महीनासम्म समय लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले हाल बाधा अड्काउनको प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक थिएन । १९ जनाको स्थायी समितिमा १३ जना साथीहरूले असहमति राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था उहाँले नै सृजना गर्नुभयो ।
विगतमा बैठकमा उपस्थिति भएर नै यस्ता विषय सामना गर्नुपर्छ भन्ने तपाईं नै हो । तर, अहिले बैठकमा किन उपस्थित हुनुभएन ?
हामी बैठकमा उपस्थित नभएको होइन । महŒवपूर्ण विषयमा अनलाइन मिटिङमा छलफल गर्दा त्यति प्रभावकारी हुँदैन भनेका हौं । हामीले लिखित रूपमा नै असहमति व्यक्त थियौं । त्यति गरेपछि बैठकमा बस्नै पर्छ भन्ने भएन ।
महासंघको पूर्वअध्यक्ष भए पनि तपाईं महासंघको राजनीतिमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । महासंघको पछिल्लो पटकको नेतृत्व चयनमा तपाईंको प्रभावकारी भूमिका रह्यो । तर, आफैले सघाएको नेतृत्वबाटै तपाईं अहिले टाढिनु भएको छ । तपाईंले नेतृत्वमा लगेको व्यक्ति गलत हुन् कि तपाईंको निर्णय नै गलत थियो ?
कुनै पनि व्यक्तिले म यो ठाउँमा कसरी आइपुगेँ, मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरा के के प्रतिबद्धता थिए भन्ने कुरालाई मनन गर्न आवश्यक छ । त्यसलाई बिर्सेर कुर्सी नै सबै कुरा हो भन्ने सोच्छ भने समस्या सृजना हुन्छ ।
समूहमा बसेर काम गर्दा समूह वा संस्थाप्रति इमानदारी देखाउन आवश्यक छ । म, मलाई, मैले भन्ने अहम्को जब विकास हुन्छ, त्यसपछि विखण्डन पैदा हुन्छ । त्यसपछि न समूहको कुरा आउँछ, न नेतृत्वको ।
मैले यस्तो गलत प्रवृत्तिको बारेमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा आप्mनो धारणा राखेको पनि हुँ । तर, यस्तो प्रवृत्ति उच्च नेतृत्वमा भन्दा दोस्रो तहका नेतृत्वमा भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
केही समयअघि महासंघ अध्यक्ष राणा र तपाईं एकै ठाउ“मा देखिनु हुन्थ्यो । तर, अहिले एकाएक छुट्टिनु भयो । किन ?
हरेक गलत प्रवृत्तिलाई मैले समर्थन गर्नैपर्छ भन्ने छैन । यो असहज परिस्थितिमा सरकारसँग संवाद गरेर चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भने बनाऊँ भन्ने मेरो जोड हो । त्यसैले एउटा समय नै तोकेर अगाडि बढौं भनेको हुँ । तर, विषम परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय लिन मिल्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि साथीहरूले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभयो । अब विधानअनुसार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनु भएका शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । तर, नेतृत्वमा गएपछि कोरोनाले उब्जाएको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दिनँ कि भनेर उहाँ आफै पछि हट्नुभएको छ ।
तपाईंहरूले भने यही समयमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्छ भनेर किन दबाब दिनुभएको हो ? खास कुरा के हो ?
हामीले तत्कालै नयाँ समिति चयन गरौं भनेको होइन । यसमा साथीहरूमा गलत बुझाइ भएको हो । अहिले नै विधानले अध्याक्ष राणालाई अवैधानिक अध्यक्ष मानेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउन दिनुहुन्न भन्ने मात्र हो । त्यसैले अहिले निर्वाचनको मिति तोकेर जाऊँ र प्रयास गर्दागर्दै पनि भएन भने विकल्पहरू त छँदै छन् । निकट भविष्यमा हालको कार्यसमितिलाई अवैधानिक भन्ने दिन नआओस् भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो ।
महासंघको विधानअनुसार चुनावको मिति तोकेपछि सचिवालय बाहेक अन्य कुनै पनि निकायले महŒवपूर्ण निर्णय लिन पाउँदैनन् । अहिले चुनावको मिति तोकिसकेपछि महासंघले विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । त्यो भोलि कानूनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले अब वैधानिक कार्यसमिति बनाउन आवश्यक छ । तर, अब नेतृत्वमा आउने साथीहरूलाई नै यसको मतलव छैन ।
शेखर गोल्छाजीलाई जिम्मेवारी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, नेतृत्व लिने प्रक्रियामा जाऊँ भन्दा मान्नुहुन्न । शेखरजी अध्यक्ष र भवानीजी निवर्तमान अध्यक्ष भएर अझै सहज रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
महासंघमा नेतृत्व ल्याउने मामलामा विगतमा तपाईंकै भूमिका देखिएकै कुरा हो । अहिले पनि एक पक्षलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ । महासंघमा नेतृत्व चयनमा किन तपाईं नै चाहिने हो ?
हरेक कुरालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुहुन्न । संगठनको हकमा जो सक्रिय हुन्छ, जसले अरू साथीहरूको मायालाई जित्न सकेको हुन्छ, जसले असहज परिस्थतिमा पनि साथीहरूसँग उभिने प्रयास गर्छ, त्यसले नै नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछ । यसमा चण्डीराज ढकालले मात्र गरिराख्नुपर्छ भन्ने होइन । अरू पनि यो किसिमको सक्रियता देखाएर नेतृत्वमा आउन सक्छन् । अब कोठामा नै बसेर टेलिफोन गर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थिति नदेखाउने तथा फोन पनि नउठाउने भएपछि नेतृत्वमा आउन सम्भव हुँदैन । साथै, निर्वाचनको बेलामा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरेर पनि हुँदैन । संस्थागत गतिविधिमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल नेतृत्व लिन पाउने अवसर मिल्न सक्छ ।
आफ्नो स्वार्थ जोडेर नेतृत्व लिन खोजेमा समस्या आउने हो । संस्थामा आबद्ध भएपछि जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफ्नोभन्दा पनि संस्थाको हकहितका लागि र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ । यसो भए समस्या आउँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि सारेर म भोलि यस्तो गर्छु र नेतृत्व लिन्छु भन्ने ढंगबाट अगाडि बढ्ने हो भने चुनौती आइहाल्छ ।
नेतृत्व लिने व्यक्तिले आक्षेप र आलोचना सुन्न पनि सक्नुपर्छ । राज्यसँग संवाद गर्दा संस्थाको मूल्य मान्यतामा अडिग हुन सक्दैन भने उसले हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । मैले राखेको कुरा पनि यही हो । नेतृत्वमा जाने मान्छेले पहिला म होइन, पहिला अरू भन्ने सोच राख्नुपर्छ । नेतृत्वमा गइसकेपछि आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सन पनि हुँदैन ।
बाधाअड्काउ फुकाउ प्रस्ताव महासंघका स्थायी समितिका १३ जनाले अस्वीकार गरे । त्यसैले प्रश्न उठेको हो । त्यस विषयमा पहिला नै अनौपचारिक छलफल गरेको भए समस्या हुने थिएन । यसरी बाहिर मिडियामा आएर बोल्न पनि पर्दैनथ्यो । भवानीजीलाई यो स्थानमा पु¥याउन धेरै साथीको सहयोग छ । तर, उहाँले खोलो त¥यो, लौरो बिस्र्यो भन्ने प्रवृत्ति देखाउनुभयो । यो वातावरण उहाँले नै बताएको हो । अब उहाँले यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
तस्वीर : गोंगबु बसपार्कमा बुधवार देखिएको यात्रुहरुको भिडभाड